मोदी खोलामा सात आयोजना, संकटमा असला माछा
९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १६:२४
कुश्मा, ९ कात्तिक । ‘असला माछा’ पाइने खोला भनेर चिनिएको पर्वतको मोदी खोलामा अब भने असला माछा पाउन मुश्किल हुने भएको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने अम्बोटमा असला माछा खानकै लागि लाम लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । मोदीका असला माछा भनेपछि टाढा टाढाबाट यात्रुहरु ओइरो लाग्थे । घण्टौं कुरेर पर्वतको सम्झना स्वरुप असला माछा लिएर पनि जान्थे कतिपयले । तर, अब मोदी खोलामा असला माछा त्यति सजिलै नपाइने भएको छ ।
वि.सं. २०४६ देखि मोदी खोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रम शुरु भएको थियो । मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले भने, “अहिले नदीभरि सातवटा हाइड्रो हुँदैछन् । यिनीहरु हाम्रो समृद्धिको बाटो पहिल्याउने कुरामा सहायकसिद्ध हुनेछन् भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।” उनका अनुसार वि.सं. २०५३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४ मेगावाट क्षमताको मोदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गरेको थियो भने युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले वि.सं. २०६९ देखि युनाइटेड मोदी–१ आयोजनाबाट १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले साढे १० मेगावाटको युनाइटेड मोदी–२ निर्माण थाल्न अघिल्लो वर्ष सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाएको थियो । गत वर्ष जिल्लावासीबाट १० करोड तथा सर्वसाधारणबाट १२ करोड रुपैयाँ शेयर जारी गरी सङ्कलन गरिएको थियो । युनाइटेड मोदीले नयाँ आयोजना निर्माणको मिति अन्योलमा परे पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत आयोजनाका लागि आवश्यक काम अघि बढिरहेकाले आयोजना निर्माण हुनेमा कुनै आशङ्का नरहेको जनाएको छ ।
“आयोजना बन्ने कुरामा दुई मत छैन,” युनाइटेड मोदीका सञ्चालक उपेन्द्र गौतमले भने, “लागत केही बढेकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल मात्र थपिएको हो ।” प्राधिकरणले ४२ मेगावाटको अपर मोदी ‘ए’ र १८ दशमलव २ मेगावाटको अपर मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ । दुवै आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको जानकारी अपर मोदी आयोजना कार्यालयले दिएको छ ।